Valves fitaovana, Fittings, Integration rafitra ranon-javatra - CIR-LOK
Tubing sy Hoses Flexible
Santionany cylinders sy condensate vilany
Fandrefesana fanerena ny faritra miovaova sy Syphons
Ultrahigh Purity Products
Fanerena mahery vaika
Momba ny CIR-LOK
Ny orinasa izao dia nitombo ho orinasa manerantany izay mamolavola, mamolavola ary manamboatra vokatra sy serivisy avo lenta an'arivony. Ny ekipa teknika dia nanangona traikefa be dia be amin'ny indostria toy ny famokarana herinaratra, petrochemical, entona voajanahary ary indostrian'ny semiconductor.
Ny vokatra CIR-LOK rehetra dia iharan'ny fizotran'ny fitantanana fiantohana kalitao amin'ny alàlan'ny dingana rehetra amin'ny fanodinana ny baiko, ny famolavolana, ny fanamboarana, ny fitsapana ary ny fanamarinana mba hahazoana antoka fa mahafeno ireo fepetra takian'ny mpanjifa ireo.
Ao amin'ny CIR-LOK, miezaka ny hanome fahafaham-po tanteraka ny mpanjifanay izahay. Ny fanontanianao dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora. Ny ekipanay dia manana mpiasa mahay hamaly haingana ny fanontanianao. Ny fanaterana haingana dia antoky ny fahombiazanao.
Ny tanjon'ny CIR-LOK dia ny hametraka ny tenantsika ho mpitarika indostrialy sy hanitarana ny tsenantsika. Tazomina any amin’ny sampana tsirairay ao anatin’ny fikambanana izany. Ny ezaka tanteraka ataontsika dia hiaro antsika tsy ho very ny fifandraisantsika manokana izay mahatonga ny orinasantsika hahafinaritra sy hiroborobo ho an'ny rehetra mandray anjara.
Valves fanalefahana proportional
Fittings Tube Twin Ferrule
Fitaovana fantsona fantsona
Fitaovana Weld Fittings
Fametahana tombo-kase vita amin'ny metaly
Valves ambanin'ny ranomasina
Valve fanerena ambany, Fittings ary Tubing
Valve, Fitting ary Tubing Ultra High Pressure
Valve fanerena antonony, Fittings ary Tubing
Mpandrindra fanerena miverina
Mpandrindra ny fanerena
Mpandrindra fanerena dingana roa